June 2021 - Puntland Mirror Believable Media Website
June 27, 2021 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Maxkamada ciidamada Puntland ayaa maanta oo Axad ah dil toogasho ah ku fulisay 21 xubnood oo Al-Shabaab ah kuwaasoo lagu helay dilal ka dhacay Puntland gaar ahaan magaalada Gaalkacyo. 18 kamid ah ayaa […]
June 26, 2021 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Hal askari ayaa ku dhintay kadib markii miinada dhulka lagu aaso lala beegsaday kolonyo uu hoggaaminayay wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Galan. Kolonyada ayaa qaraxa lagula beegsaday meel u dhow degmada Iskushuban ee […]
Ciidamada badda Puntland oo qabtay markab si sharci darro ah uga kalluumeysanayay biyaha Puntland
June 24, 2021 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada badda Puntland ee PMPF ayaa qabtay markab si sharci darro ah uga kalluumeysanayay biyaha Puntland. Ciidanka badda ayaa markabka ku qabtay xeebta degmada Qandala ee gobolka Bari, sida ay sheegeen saraakiisha PMPF. […]
June 20, 2021 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddiga Kumeelgaarka ah ee Doorashooyinka Puntland ee TPEC ayaa sheegay in ay ku dhawaaqi doonaan liiska tirada dadka codbixiyeyaasha ee iska diiwaangeliyay degmooyinka Qardho, Eyl iyo Uffeyn, sida guddigu ay ku sheegeen qoraal […]
TPEC to announce number of registered voters in three districts on June 27
June 20, 2021 Abdi Omar Bile 0
Garowe-(Puntland Mirror) Transitional Puntland Electoral Commission (TPEC) said it will announce preliminary list of registered voters in the districts of Qardo Eyl and Ufeyn, the commission said in a post on its Twitter on Sunday. […]
June 15, 2021 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 15 qof ayaa lagu dilay weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho maanta oo Talaado ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan haayadaha ammaanka. Qof isa soo miidaamiyay ayaa beegsaday xarun […]
June 8, 2021 Abdi Omar Bile 0
Garoowe-(Puntland) Guddiga Kumeelgaarka ah ee Doorashooyinka Puntland ayaa sheegay in ay soo gabogabeeyeen diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashada soo socota ee dowladda hoose. Diiwaangelinta codbixiyeyaasha ayaa laga sameeyay saddexda degmo ee Qardho, Eyl iyo Uffeyn muddo labbo […]
Garowe-(Puntland) Transitional Puntland Electoral Commission (TPEC) said it had completed voter registration exercise for upcoming municipal elections. The voter registration exercise was conducted in the districts of Qardo, Eyl and Ufeyn for two weeks and […]
June 7, 2021 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda hoose ee Garoowe ayaa maanta oo Isniin ah bilowday dhismaha shan waddo oo laami ah oo uu dhagax dhigay Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. Waddooyinka oo dhammaantood kuyaala gudaha magaalada ayaa kala; […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay qarax gaari oo ka dhacay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, sida ay ilo-wareedka sheegayaan. Qaraxa ayaa ka dhacay duhurnimadii maanta oo Isniin ah Suuq Bacaad oo kuyaala [...]